06-22-2011 10:38 PM #11
ရုရှားတပ်မတော်ရှိ တီ-၉၀ ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားများဖြစ်ပါသည်။ယင်း ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားများကို ရှရုားနိုင်ငံ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် အာမေးနီးယားနိုင်ငံမှာ ဝယ်ယူထားသည်ဟု သိရပါသည်။
2323, agugu, creative2020202020, honelay86, hotrod, JanJan, k-pooh, kokoye, koluchaw, lovercreator84, MountainGiant, Nsaboy, Oscar Htun, pauksi, Perigee, shankalay2007, wasabi, winekyaw
06-26-2011 06:22 AM #12
အမ်အိုင်-၃၅ တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ် (မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အစီးရေ ၅၈စီး ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။
အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ကေ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောသုံး ဘက်စုံသုံးတိုက်လေယာဉ်
အက်စ်ယူ-၄၇ ဘက်စုံးသုံးတိုက်လေယာဉ် (ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိပါ)
အက်စ်ယူ-၃၃ တိုက်လေယာဉ်များကို အစပိုင်းတွင် ရုရှားရေတပ် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောကြီးပေါ်တွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ကေ တိုက်လေယာဉ်များဖြင့် ပြောင်းလည်း အသုံးပြုခဲ့သည်။အက်စ်ယူ-၃၃ နှင့် အမ်အိုင်ဂျီ-၂၉ကေ များ၏ တိုက်ခိုက်ရေး စွမ်းရည်အား ယခုအချိန်ထိ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
Last edited by MMDW; 06-26-2011 at 06:42 AM.
agugu, chitpa, honelay86, JanJan, k-pooh, koluchaw, lovercreator84, MountainGiant, Oscar Htun, pauksi, Perigee, RunAtServer, Shwe Myoh Tharr, springnet1997, thuthuaung, wasabi
06-26-2011 06:43 AM #13
udkMMDW cifAs ... ydkYpfawGwifay;wJhtwGuf aus;Zl;wifygw,f/
o&ufacgif;pOft& jzpfEdkif&if yHkawGeJYtwl tnTef;pmawG&,f Specification awG&,fudkyg a&;ay;&if uRefawmfwdkYvdk ppfwyftaMumif;pdwf0ifpm;wJhrefbmawGtwGuf tusdK;aus;Zl;tifrwefrsm;rSmjzpfygw,f/
tckvdkrsdK; av,mOfyHkawGcsnf;wifawmh bmav,mOftrsdK;tpm;awGrSef; olwdkY[m b,fae&mawGrSmoHk;rSef;udk rodygbl;/
uRefawmfa&;aewkef; tnTef;pmav;awG jyefjznfhay;wJhtwGuf aus;Zl;wifygw,fcifAsm/ jzpfEdkif&if wdkufcdkufa&;,mOf wpfpD;csif;pD&Jh Specification awGudk a&;ay;vdkY&rvm;cifAsm/ a&;ay;zdkYtqifrajy&ifvnf; vifhav;nTef;ay;&ifudk tqifajyygw,fcifAs/ uRefawmfwdkYtm;vHk; A[kokwwdk;yGm;apzdkYygcifAsm/
Last edited by Shwe Myoh Tharr; 06-26-2011 at 06:46 AM. Reason: Thanks for adding labels
agugu, BamarBlood, chitpa, honelay86, k-pooh, koluchaw, MrYoDa, Perigee, RunAtServer, springnet1997, thuthuaung
06-26-2011 06:47 AM #14
ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်ပိုင်းမှာ စုံလင်စွာတင်ပေးပါမယ် ခင်ဗျာ..။
agugu, BamarBlood, chitpa, honelay86, k-pooh, koluchaw, lovercreator84, Oscar Htun, Perigee, RunAtServer, Shwe Myoh Tharr, springnet1997, wasabi
07-06-2011 11:18 PM #15
BM-21 122mm MLRS
ဘီအမ်-၂၁ အတွဲလိုက်ပစ်ဒုံးကျည် ဂရက် (Grad) ဟုအမည်ပေးထားပြီး ဆိုဗီယက်တပ်မ
တော်တွင် ၁၉၆၃ မှ စတင်အသုံးပြုပါသည်။ ပြောင်းဝ ၁၂၂ မမ အရွယ်ပြောင်း ၄၀ ကို၁
တန်းလျှင် ၁၀ ပြောင်းဖြင့် ၄ တန်းစီထားပါသည်။ ၄င်းဒုံးကျည်ပစ်စင်ကို ထရပ်ကားပေါ်
တွင် တပ်ဆင်တည်ဆောက်ထာပြီး ထရပ်ကား၏ အင်ဂျင်စက်မှာ မြင်းကောင်ရေ ၁၈၀
အား ရှိ ရေဖြင့်အအေးပေးသော V-8 ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်ဖြစ်ပါသည်။ အမြန်ဆုံး တစ်နာရီလျှင်
၇၅ ကီလိုမီတာထိမောင်းနှင်နိုင်ကာ လမ်းမပေါ် တွင် ၇၅၀ ကီလိုမီတာထိဆက်တိုက်သွား
နိုင်သည်။ ၁.၅ မီတာ (၆ပေ ၉ လက်မ) ထိနက်သော မြစ်ချောင်းကိုဖြတ်နိုင် ပါသည်။
စစ်သည် ၅ ဦးရှိပါက ၃မိနစ်အတွင်း ပစ်ခတ်နိုင်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ကားထဲမှ၎င်း
သို့မဟုတ် ၆၄ မီတာရှည်သော ကြိုးဖြင့်ထိန်းကာ ပစ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ ဒုံးကျည် ၄၀ လုံးကို
ို စက္ကန့် ၂၀ အတွင်းအကုန်ပစ်နိုင်သလို တစ်တောင့်ချင်းသော်၎င်း၊ အနည်းငယ်ဆီအချိန်ခြား
၍ လိုသလိုပစ်ခတ်နိုင်သည်။ ဘီအမ်-၂၁ သည် ၂ မိနစ်အတွင်းသိမ်းဆည်း နေရာပြောင်းရန်
အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ပြီး အလိုအလျောက်ကျည်ဖြည့်စနစ်မရှိသဖြင့် ကျည်ပြန်ဖြည့်ရန်
၁၀ မိနစ်ကြာနိုင်ပါသည်။ အနည်းဆုံး ၅ ကီလိုမီတာ မှ အဝေးဆုံး ၄၀ ကီလိုမီတာ အတွင်း
ရှိပစ်မှတ်များကို ပစ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်တွင်အသုံးပြုနေပြီး ထုတ်လုပ်
သည့်နိုင်ငံများမှာရုရှား၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊အီဂျစ်နှင့်ချက်ကိုစလိုဗာကီးယားနိုင်ငံ
ထုတ်လုပ်သည့်ချိန်..................... ၁၉၆၃ မှ ယခုထိ
အသုံးပြုခဲ့သည့်စစ်ပွဲ .................. 1995 Cenepa War (အီကွေဒေါ နှင့် ပီရူး)
2008 South Ossetia War (ရုရှား နှင့် ဂျော်ဂျီယာ)
အလေးချိန် ............................. ၁၃.၇၁ တန်
အလျား .................................. ၇.၃၅ မီတာ (၂၄ ပေ)
အကျယ် ................................ ၂.၄ မီတာ ( ၇. ၈၇ ပေ)
ပြောင်းအလျား ......................... ၃.၀ မီတာ (၉.၈၄ ပေ)
အမြင့် .................................... ၃.၀၉ မီတာ ( ၁၀. ၁၃ ပေ)
စစ်သည် ................................ ၄ ဦး
ပြောင်းဝ ................................ ၁၂၂.၄ မမ (၂.၄၈ လက်မ)
ပြောင်းအရေတွက် ................... ၄၀
ဒုံးကျည်အလေးချိန် .................. ၆၆.၆ ကီလိုဂရမ်
်ထိပ်ဖူးအလေးချိန် .................... ၁၈.၄ ကီလိုဂရမ်
ပစ်နှုန်း ................................ ၁စက္ကန့်လျှင် ၂ တောင့်
့်အဝေးဆုံးရောက်နိုင်သောအကွာဝေး ... ၂၀ မှ ၄၀ ကီလိုမီတာ
မှန်ပြောင်းကရိယာ ........................... PG-1M Panoramic telescope
အင်ဂျင် .......................................... V-8 gasoline Zil-375
အမြန်နှုံး ........................................ တစ်နာရီလျှင် ၇၅ ကီလိုမီတာ
ပြောင်းမြှောက်နိုင်အား ........................ ၀ မှ ၅၅ ဒီဂရီ
ပြောင်းလှည့်နိုင်အား .......................... ၁၈၀ ဒီဂရီ ( ဘယ်ဖက် ၁၂၀၊ ညာဖက် ၆၀)
ရေဒီယို ......................................... R-123M
agugu, BamarBlood, chitpa, GeneralBoz, honelay86, k-pooh, koluchaw, lovercreator84, Mini_Me, MountainGiant, nna1981, Oscar Htun, Pa Yope Sie, RunAtServer, Shwe Myoh Tharr, THIHA, thuthuaung, wasabi
07-29-2011 11:49 PM #16
ရုရှားလေတပ်ရဲ့ ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ် PAK FA အကြောင်းပါ။
ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိတော့သည့် အက်စ်ယူ-၄၇ တိုက်လေယာဉ်
အမ်အိုင်ဂျီ-၃၁ ဘက်ဆုံးသုံးတိုက်လေယာဉ် အကြောင်းပါ ခင်ဗျာ...။
agugu, BamarBlood, GeneralBoz, honelay86, koluchaw, Mini_Me, MrYoDa, Oscar Htun, RunAtServer, wasabi
07-30-2011 04:15 AM #17
,Ofwif 'Hk;ypf avmifcsmawGudk ppfyGJ rSmwGifwGifus,fus,f oHk;cJholawG u qdkAD,uf (tck &k&S) awG wJh/ uwåLoQ vdk h ac: wJ h'Hk;ypfavmifcsm awG udk *smrefeJ hwdkufwJh yGJ rSm xdxda&mufa&muf oHk;cJhzl;w,f/ *smrefawGu pwmvif &J hatmf*if qdkjyD; epfedrf; ay;xm; Muygw,fwJh.. / tajrmufawG vufvSrf;rrD wJh ae&mu aejyD; 'Hk;usnfrdk;&Gm Edkifwmudk;/ jyD;awmh um;awGay: wifxm;awmh a&G hajymif; ae&m,l ppfupm;&wmuvJ ydk oGufvufw,f/ t&if 0gaqm tkyfpk awGrSm us,fus,fjyef hjyef hwyfqifcJhzl;jyD; tar&duef awGuawmh 'Dvdk 'Hk;wGJ pHepfudk 80 0ef;usifavmuf rS pjyD; oHk;cJhw,fwJh /
wdkufcdkufa&; &[wf,OfBuD;awGu &k&SawG &J hAsL[majrmuf ajrjyifacsrkef;a&; vufeufawGyg/ aewdk; awG oHk;ovdk r[kwfbJ olu vlvJ o,f vufeuf wyfqiftiftm;u vJ rsm; wJh yHkpHrsdK;/ ppfonfawGudk tvsiftjrefa&G hajymif; ae&mcsEdkifjyD; wpfBudrfwnf;rSm avaMumif; BuD;aMumif;u ae xdk;ppfqifEdkifwJh yHkpHrsdK; twGuf pDrHxm;wmaygh/ qdkAD,ufawG tz*efudk 0ifawmh olykefawGudk tBuD;tus,f 'kuay;cJhwmu tJh'd gun ship BuD;awGygyJ../ tar&duefawG qDu ycHk;xrf; av,mOfypf 'Hk;awG &jyD;wJh aemufydkif;rSmawmh tJh'd &[wf,OfBuD;awG usqHk;csdef a&mufawmh wmygyJ../
agugu, BamarBlood, chitpa, Devil_Killer, GeneralBoz, honelay86, JanJan, koluchaw, Mini_Me, Oscar Htun, Pa Yope Sie, RunAtServer, THIHA, wasabi
07-30-2011 03:39 PM #18
Cadet Cupid : )
Thanked 4,111 Times in 378 Posts
öusaemf b,frSmwif&rSef;rodvkd. 'DrSmyJwifvkdufygawm.r,f /
atmufuvif.av; uppfa&; pdwf0ifpm;wJ.olawGtwGufwu,f av.vmzkd.aumif;wJ. qkd'fav;yg /
wEkdifiHNcif;pD&J. tm;enf; tm;omcsuf ukd ,SOfBunf.vkd.&ovkd ?oufqkdif&m ppfvufeuf ypönf; trsm;qkH; ykdifqkdifwJ.EkdifiH( Oyrm av,mOf ?wif.um;..)pwmawGvnf;Bunf.vkd.&ygw,f /
Oyrm tar&duef eJ. &k&Sm; ukd,SOfBunf.r,fqkd 'DvkdNyygw,f /
'Datmufuvif.av;rSmawm. wkdufav,mOf awG&J. pGrf;&nf awGukdESKdif;,SOfBunf.Ekdifygw,f /
yxrurÇmppfuav,mOfawG tygt0if wkdufckdufa&; &[wf,mOf ?AkH;BuJav,mOfrsm;yg
'DykHav;u tar&duefav,mOfwifoabFmawGrSmokH;wJ. F/A-18 Super Hornet eJ.
&k&Sm;av,mOfwifoabFmokH; Sukhoi Su-33 ukd,SOfNyxm;wmyg /
Last edited by agugu; 07-30-2011 at 08:03 PM.
bachitdin, BamarBlood, chitpa, GuruAM, honelay86, JanJan, koluchaw, Mini_Me, MMDW, MrYoDa, Oscar Htun, RunAtServer, THIHA, wasabi
08-30-2011 08:44 PM #19
ဗီယက်နမ်ရေတပ် အကြောင်းဖြစ်ပင်မဲ့ ရုရှားထုတ်တွေမို့ ဒီထဲဘဲတင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။
ကျွှန်တော် သဘောကျတဲ့ စစ်ရေယာဉ်အမျိုးအစားတွေပါ။ရုရှားထုတ်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ ဗီယက်နမ်ရေတပ်က အသုံးပြုနေပါတယ်။Trantul (HuangFeng) အမျိုးအစားကို ပြန်လည် အဆင့်မြင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်တွေကို အကြီးအကျယ်ပြုပြင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြင် ဗီယက်နမ်ထုတ်စစ်ရေယာဉ်သစ် အမျိုးအစားများစွာရှိပါသေးသည်။
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး...၃၀မမ အေကေ-၆၃၀...၂လက်၊၁၂.၇မမ စက်သေနတ် ၂လက်
တို့ဖြစ်သည်။ဘီပီအက်စ်-၅၀၀ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ပြီး ရုရှားမှ နည်းပညာများဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်ဟု သိရပါသည်။
(မိမိလေ့လာမိသလောက် ဖော်ပြခြင်းသာလျှင်ဖြစ်၍ အမှားများကို ဝေဖန်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
agugu, GuruAM, honelay86, kokothaw, koluchaw, Mini_Me, MrYoDa, nna1981, Nsaboy, Oscar Htun, Pa Yope Sie, pauksi, THIHA, thuthuaung